Horudhac: Southampton vs Manchester United… (Macallin Ole iyo wiilashiisa oo booqanaya koox aan laga badin 7 kulan) – Gool FM
(Southampton) 29 Nof 2020. Kooxda Manchester United ayaa isha ku heysa inay sii wadato guulaheeda marka ay la ciyaarayaan naadiga qaab ciyaareedka fiican ku jirta ee Southampton kulanka galabta oo Axad ah ee Premier League.
Red Devils ayaa u safreysa garoonka St Mary’s iyagoo saddex kulan oo isku xiga adkaaday tartammada oo dhan, laakiin waxay wajahayaan tijaabo adag, maadaama aan kooxda Southampton oo laga badinin 7 kulan.
Kooxda kaalinta shanaad ku jirta ee Southampton ayaa soo galaysa kulankaan, iyadoo afar dhibcood ka sarreysa Man United, inkastoo ay ciyaareen in ka badan kooxaha ka soo hor jeeda.
Southampton ayaan heli doonin Danny Ings iyo Nathan Redmond, maxaa yeelay waxa ay la maqan yihiin dhaawacyo Jilibka iyo muruqa ah.
Theo Walcott ayaa sii wadan doona ciyaartiisa, inkastoo ay laf ka jabtay gacantiisa bidix.
Dhinaca kale Macallinka Kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay inaysan si aad ugu badnayn in midkood Paul Pogba ama Scott McTominay ay diyaar noqon doonaan kulankaan.
Luke Shaw ayaa weli sii maqnaan doona, laakiin Marcus Rashford, Victor Lindelof iyo Aaron Wan-Bissaka waa inay dhammaantood noqdaan kuwo taam ah.
Southampton ayaan wax guul ah gaarin siddeedii kulan ee ugu dambeeyay oo ay la ciyaartay Man Utd, 5 jeer barbaro ayay gashay, halka saddaxda kale laga badiyay.
Shan ka mid ah toddobadii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka ee u dhaxeeyay kooxahan ayaa ku dhammaaday barbaro oo ay ku jiraan labadii kulan ee xilli ciyaareedkii hore.
Manchester ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) sagaal kulan oo horyaalka ah oo ay u safreen Southampton tan iyo guuldarradii 1-0 ee bishii Agoosto 2003, waxaana ay ka haystaan 5 guul iyo 4 barbaro, taasi waa khasaarihii kaliya ee ka soo gaaray booqashooyinkii 15 ahaa ee la soo dhaafay, waxaana Man Utd marka ay garoonkan booqato 14-ka kulan ee kale ay ka haysataa 10 guul iyo 4 barbaro.
>- Southampton ayaa guuldarro la’aan ah todobo kulan, waxaana ay haystaan shan guul iyo labo barbaro.
>- Toddobo iyo toban dhibcood oo ay haysato Southampton ayaa ka dhigtay kooxda shanaad ee ugu sarreysa haatan kaddib sagaal kulan oo Premier League ah.
>- Waxay ku badiyeen 2-0 mid kasta oo ka mid ah saddexdii kulan ee ugu dambeeyay Premier League oo ay ku ciyaareen gurigooda.
>- Saints ayaa raadinaysa inay shabaqeeda gool ka ilaashato afar kulan oo isku xiga oo horyaalka ah markii ugu horreysay tan iyo bishii Febraayo ee sanadkii 2016.
>- Kooxda Ralph Hassenhuttl ayaa dhammaan goolal dhalisay marka laga reebo mid ka mid ah 16-kii kulan ee ugu dambeeyay ee ay ciyaartay horyaalka.
>- Che Adams ayaa si toos ah ugu lug yeeshay lix gool sagaal kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan, waxa uu dhaliyey saddex gool, isagoo caawiye ka ahaa saddex kale.
>- Manchester United ayaa laga yaabaa inay dhigto rikoor cusub oo kooxdeeda ah, isla markaana ay maanta soo adkaato siddeed kulan oo isku xiga oo ay marti ahaayeen ama ay ku soo ciyaareen meel ka baxsan garoonkeeda.
>- Red Devils ayaa sidoo kale barbareyn karta rikoorka Premier League kooxda ee dhalinta goolal badan, iyadoo goolal dhalin kara siddeed kulan oo isku xiga oo ay marti ahaayeen tan iyo laga soo bilaabo December 2001 ilaa March 2002.
>- Tan iyo markii uu saftay kulankiisii ugu horreeyey Bruno Fernandes ayaa gacan ka geystay 24 gool oo horyaalka ah, waxaana uu dhaliyey 14 gool isagoo caawiye ka ahaa 10 gool oo kale.
>- Fernandes ayaa noqon kara ciyaaryahankii afaraad ee Manchester United, kaasoo gool dhaliya shan kulan oo xiriir ah horyaalka oo ay kooxdiisu ku soo ciyaartay bannaanka ama ay marti ahaayeen.
>- Anthony Martial waxaa dhaafay 7 kulan oo horyaalka Premier League ah isagoo aan wax gool ah dhalin.